Paramende Inoti VaKasukuwere Ngavaongororwe neNyaya yekuNyepera VaMugabe paNyaya yeHomwe yeMari yeMangoda
Gumiguru 25, 2016
Komiti inoona nezvevechidiki nekuendeswa kwehupfumi kuvatema nhasi yakurudzira kuti gurukota rinoona nezvematunhu VaSavior Kasukuwere vaongororwe vachipomerwa mhosva yekunyepera mutungamiri wenyika VaRober Mugabe nezvekubatsirwa kwevanhu vekwaMarange nemakambani anochera mangoda ari munharaunda mavo.
Asi kuda kuburitsa ongororo ine mashoko aya kwapa kuti paite kunetsana nekukakavadzana pkati penhengo dzeparamende kubva kumapato ose nemutauriri wedare Amai Marble Chinomona. Amai Chinomona vange vasingadi kuti sachigaro wekomiti iyi VaJustice Mayor Wadyajena, veZanu PF vasature kudare zvakabuda muongooro yakaitwa nekomiti yavo pamusoro peZimunya Marange Community Share Onwership Trust.
Mushure mekurambidzwa kutura gwaro ravo VaWadyajena vataura nenhengo dzekomiti yavo uye vange vave kutobuda mudare apo nhengo dzedare iri kubva kumativi ese dzakatanga kuratidzira kusafara nedanho range ratorwa naAmai Chinomona.
Amai Chinomona vati gwaro raVaWadyajena range richida kugadziriswa asi nhengo dzedare iri dzaramba izvi dzichiti gwaro iri rakatadza kuturwa mudare nekuda kwechikonzro chimwecho.
VaJoseph Chinotimba veZanu PF ndemumwe wevasina kufara uye vati hazvina kunaka kuti magwaro anoburitsa huwori arege kuburitswa.
VaChinotimba vati varwi verusununguko havana kuendera kuhondo kuti paite vamwe vanhu vanodya asi vamwe vachitambura sezviri kutika munyika parizvino uye vati VaWadyajena vanofanira kupihwa mukana hwekutaura huwori hwakabuda mungororo yavo yekwaChiadzwa.
Amai Chinomona vazobvuma kuti VaWadyajena vature gwaro ravo mushure mekukavadzana kwenguva refu nenhengo dzedare iri idzo dzapika kuti hapana zvaizoitwa kana dai VaWadyajena varambidzwa kutura gwaro ravo.
Vachitura gwaro rekomiti yavo iyo ine nhengo makumi matatu, makumi maviri kubva kuZanu PF, sere kubva kuMDC T, ne imwe kubva kuMDC, VaWadyajena vati ongororo yavo yakaburitsa pachena kuti vaimbove gurukota rezvevechidiki nekuendeswa kwehupfumi kuvatema VaSaviour Kasukuwere vainge vanyepa apo vakati makambani mashanu aichera mangoda kwaMarange ainge avimbisa kubvisa mamiriyoni gumi emadhora pakambani imwe neimwe kuti mari iyi ibatsire kuumbwa kweZimunya Marange Community Share Ownership Trust.
Vati ongororo yavakaita inoratidza kuti makambani aya pamwe nebazi rezvemugodhi vainge vasina kuita chivimbiso ichi uye ivo VaKasukuwere pachavo vakatadza kuburitsa magwaro anoratidza izvi.
Komiti iyi yati zviri pachena kuti VaKasukuwere vakanyepera vanhu vekwaMarange pamwe nemutungamiiri wenyika, VaRobert Mugabe avo vakaparura homwe iyi.
Nekuda kwaizvozvo komiti yakaita zvisungo zvakawanda zvinosanganisira chisgungo chekuti mapurisa, komisheni inoongorora huwori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission pamwe nevamwe vanoona nezvemutemo vanongorora kuita kwaVaKasukuwere, vashandi vemubazi revechidiki pamwe nemakambani aichera mangoda kwaMarange.
Komiti iyi inotiwo hurumende inofanira kuona zvaingaite kuti vanhu vekwaMarange vabatsirikana pamangoda ari kucherwa munzvimbo mavoe nezvekubatsirwa kwevanhu vekwaMarange nemakambani anochera mangoda ari munharaunda mavo.
Asi kuda kuburitsa ongororo ine mashoko aya kwapa kuti paite kunetsana nekukakavadzana pkati penhengo dzeparamende kubva kumapato ose nemutauriri wedare Amai Marble Chinomona. Amai Chinomona vange vasingadi kuti sachigaro wekomiti iyi VaJustice Mayor Wadyajena, veZanu PFvasature kudare zvakabuda muongooro yakaitwa nekomiti yavo pamusoro peZimunya Marange Community Share Onwership Trust.
Komiti iyi inotiwo hurumende inofanira kuona zvaingaite kuti vanhu vekwaMarange vabatsirikana pamangoda ari kucherwa munzvimbo mavo
Vanhu Vatatu Vofa neKuda kweMafashamu eMvura kuManicaland
VaJoe Biden Voita Hurukuro naVaBoris Johnson neVamwe Vatungamiri
Hurukuro naVaTrevor Saruwaka
Vanhu Mazana Maviri neMakumi Mapfumbamwe neMumwe (291) Vofa neCovid-19 Mumazuva Manomwe